Raasamaalku wuxuu kasbaday koorsada soo kabashada ee Honduras - Geofumadas
Mee, 2008 Maamulka Land
Laga bilaabo 26 illaa 28 ee May, koorso ku saabsan saameynta Qorshaha Territorial ee dib u soo kabashada guulihii raasamaalka iyo qaabab sida maamulka dhulka waa inuu abuuraa qalab wax ku ool ah sidaa darteed taasi waxay joogsataa inay noqoto gabayga Hernando de Soto oo keliya.
Munaasabadda waxaa dallacsiiyay the Machadka Lincoln ee Maamulka Dhulka, inkasta oo aysan si rasmi ah ii soo ogeysiin hadana waxaan ku ogaa kaliya casuumada ay ii soo direen si aan uga soo qeyb galo xafladan ... iyo safarkayga kale BE shir Keliya waxaan noqon karaa maalinta ugu horreysa, salaamo saaxiibbada dhexe ee Mareykanka oo aan aad uga badneyn… murugo aad u weyn.
Waxaa lagu qaban doonaa xarumaha Dugsiga Beeraha Zamorano waxaana ku dallacsiin doona Xarunta CEDAC Design and Architecture Center
Waxaa jiri doona jiritaanka, iyo kuwa kale, Martin Smolka, oo leh awood weyn oo uu ku seexdo kuwa yar ee xiiseynaya laakiin kuwa ku socda koorsada leh himilooyin wanaagsan wuxuu furaa aragtida ku saabsan arrimaha sida:
"Astaamaha hawlgalinta suuqyada dhulka magaalooyinka ee Latin America"
Haddii ay jiraan suuqyo!
Wax walbana waa ganacsi;
Gaaritaanka dhulka dhib malahan ciid loo adeegay haddii ay dhibaato tahay;
Dhul si kufilan ayaa looga adeegay qiimo jaban.
Hagaag, halkaas ayaan kugu aragnaa.
Post Previous" Hore Eeg mesh lat / waqti dheer ee Dunida Virtual
Post Next Waa maxay kan ugu horreeya, cadastare ama Amar dhuleed?Next »